Wilfried Zaha oo maqan Kulanka kooxdiisii ​​hore ee Man United la ciyaarayaan
Home Horyaalka Ingiriiska Wilfried Zaha oo maqan Kulanka kooxdiisii ​​hore ee Man United la ciyaarayaan
Roy Hodgson ayaa awooday inuu warbixin fiican ka bixiyo xaalada dhaawac ee Crystal Palace ka hor kulanka Manchester United , laakiin Wilfried Zaha lama filayo inuu wajaho kooxdiisii ​​hore.
Ciyaaryahanka reer Ivory Coast ayaan ciyaarin tan iyo markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa bowdada kulankii ay 2-1 kaga badiyeen Newcastle bishii Febraayo 2 inkastoo uu ku soo laabtay tababarka.
Safarka United ee Selhurst Park ayaa si dhaqso leh ku imaan doona gooldhaliyaha ugu sareeya Palace laakiin Hodgson ayaa sheegay in ay xoojin doonaan Jeffrey Schlupp iyo Connor Wickham oo la heli doono ka dib dhaawacyo muddo dheer ay la maqnaayeen.
Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay Jeff Schlupp iyo Connor Wickham inay ka soo kabteen muddooyinkii dheer ee ay maqnaayeen waana la heli karaa.
Waxaan raadineynaa wax badan sidii aan aheyn inaan hada noqono marka loo fiiriyo afartii ilaa shantii todobaad ee ugu dambeysay.
“Ma dooneyno inaan ku riixno isaga ka dib waqti dheer oo uu ka maqnaa tababarka kooxda.
Previous articlePaul Pogba oo ka hadlay hadii uu doonayo heshiiska Cusub ee Manchester United
Next articleRio Ferdinand oo ku booriyay Manchester United inay la soo saxiixato Erling Haaland ama Kylian Mbappe